Mareykanka, UK iyo Australia oo sameystay iskaashi amni oo cusub
Mareykanka, oo ay wehlinayaan xulufadiisa dhow ee Australia iyo Boqortooyada Ingiriiska, ayaa ku dhawaaqey iskaashi cusub oo amniga oo saddex geesoodka ah kaasoo loo yaqaano “AUKUS”
“Mareykanka, Australia, iyo Boqortooyada Ingiriiska ayaa muddo dheer ahaa dalal dhistey is aaminaad, Karti leh, manta intaasi waan isaga dhownahay…Waxaan qaadaynaa tillaabo kale oo taariikhi ah oo aan kusii xoojinayno kuna xoojinayno Iskaashigeena saddex-daan dal, maxaa yeelay waxan dhamaanteen aaminsanahay muhiimada in la ilalaiyo nabada iyo xasiloonida Indo-Pacific muddo dheer….. Maxaa yeelay mustaqbalka dalalkeena iyo xaqiiqdii dunida ayaa ku xiran in la helo dalalka Indo-Pacific dhaca ooh or ah oo furan adkaysina leh sanadaha horteena ah”
AUKUS waxaa ay qeyb ka tahay dadaalada la rabo in lagu xoojiyo xulufada Mareykanka si dhab ah is loo wajaho caqabadaha haatan iyo mustaqbalka ayuu yiri Madaxweyne Biden.
“Waxay ku saabsantahay isku xirka xulufada hadda jirta ee Mareykanka iiyo saaxiibadooda oo habab cusub u xoojinayo awoodaha ay u leeyhiin ka wadashaqeynta amniga. Waa muhimaddeena ugu horeysa anaga oo aqoonsanayna inaysan jirin kala qaybin goboleed oo kala soocayso danaha saaxiibadeena Atlantic iyo Pacific.
Waxa intaasi dheer, AUKUS waxaa ay ka dhabaynaysaa in midkasto oo naga mid ah…. Gaar ahaana khibaradaha casriaga ah.. oo aan ku howgalno ama isaga caabino khataraha soo kordhayo,” ayuu sii raaciyey madaxweyne Biden.
“AUKUS waxaa ay isu keeni doontaa Ciidamadeena Badda, Seynisyahaneeda, Warshadaheena si aan u weynayno awoodaheena militariga iyo khataraha Tiknoolajiyada, sida kuwa Cyber, Mukhaabaraadka macmalka ah,Tiknolajiyada muhiim ka ah iyo khadadka badda hoosteeda maro.”
Mashruuc muhiim ah oo AUKUS ay xooga saari doonto ayaa ah wadiiqooyinka ugu fiican ee la doonayo in Australia ay u hesho ciidamo caadi ah, gujiyada quwadaha nuclear ah ee Ciidamad badda dalkaas uu yeesho.
Madaxweyne Biden ayaa hoosta ka xariiqey in dhinacyada dhamaantood ay qaadi samayn doonaan dadaaladas ayadoo la marayo hanaanka hoggaaminta mudada dheer soo jirtey ee gobo lee ku dhisnayd xadeyn la’aanta iyo hubinta heerarka caalamiga ah, ayadoo lala sameynayo wada tashi iyo wadatashi hay’ada caalamiga ah ee qaabilsan Tamarta Atomic-ga.
In kabadan 70 sano, Australia, Boqortooyada Britain, iyo Mareykanka waxaa ay lahaayeen wada shaqeyn muddo dheer ah, ayadoo ay wehlinayaan saxiibo kale, si loo ilaaliyo dhanaha ka dhexeeyo loona kobciyo amniga iyo barwaaqada. Ku dhawaaqista AUKUS ayaa ah tallaabo muhiim ah oo loo qaadey dhamaystirka danahan laga flinayo gobolka Indo-Pacific.